I-Sellfy: Yakha Imikhiqizo Yakho Yokuthengisa Ibhizinisi Le-Ecommerce noma Okubhaliselwe Ngamaminithi | Martech Zone
I-Sellfy: Yakha Imikhiqizo Yakho Ethengisa Ibhizinisi Le-Ecommerce noma Okubhaliselwe Ngamaminithi
Lwesibili, Disemba 14, 2021 Lwesibili, Disemba 14, 2021 Douglas Karr
Ukuthengisa iyisixazululo esisebenziseka kalula se-eCommerce sabadali abafuna ukuthengisa imikhiqizo yedijithali nengokwenyama kanye nokubhaliselwe nokuphrinta okudingekayo - konke kuvela ngaphambili kwesitolo esisodwa. Kungakhathaliseki ukuthi ama-eBooks, umculo, amavidiyo, izifundo, okuthengiswayo, ukuhlobisa ikhaya, izithombe, nanoma yiluphi olunye uhlobo lwebhizinisi.
Qala kalula - Dala isitolo ngokuchofoza okumbalwa. Bhalisa, engeza imikhiqizo yakho, yenza ngokwezifiso isitolo sakho futhi uphile.
Khula kakhulu - Sebenzisa izici zokumaketha ezakhelwe ngaphakathi ukukhulisa ukuthengisa kwakho nebhizinisi. Noma ngabe udinga izaphulelo, ukuthengisa umkhiqizo phezulu, noma isevisi ye-imeyili, u-Sellfy ukukhavé.
Thengisa noma yikuphi - Finyelela izethameli zakho futhi udayise ngqo ezinkundleni zokuxhumana, iwebhusayithi yakho nanoma yikuphi kwenye indawo ngesitolo sangaphambili sangokwezifiso.
Ukuthengisa abadali bangaxhuma isitolo sabo kuwebhusayithi ekhona, basebenzise isitolo sabo njengesizinda esiyinhloko, noma bashayele ithrafikhi kwezinye iziteshi ngendlela ekhangayo. Thenga Manje izinkinobho nezinye izinketho zokushumeka. Ukuthengisa futhi iza namathuluzi okuthengisa akhelwe ngaphakathi ahlaba umxhwele (ukuthengisa nge-imeyili, amakhuphoni, izaphulelo, ukushiywa kwenqola, ukuthengisa) kanye nezibalo. Futhi, kungenzeka ukuxhumana nezinhlelo zokusebenza zezinkampani zangaphandle ezingu-2000+ usebenzisa i-Zapier.
Yini eyenza Ukuthengisa okuhlukile ukuthi sigxile ekululameni. Ungakwazi ukwakha ngokoqobo isitolo esisebenza ngokugcwele ngaphansi kwemizuzu emi-5. Uzothola Ukuthengisa ukulingana okuhle uma ungumuntu owazisa kakhulu ukusetshenziswa kalula futhi akafuni ukuchitha isikhathi efunda.
Ukuthengisa inikeza uhlelo lwamahhala lokuthengisa imikhiqizo ephrintiwe lapho idingeka kakhulu kanye nengokwenyama. Futhi zonke izinhlelo ziza ngaphandle kwemali yokwenziwayo. Kunezinhlelo ezintathu ezengeziwe ezitholakalayo: I-Starter, Business, ne-Premium. Lezi zinhlelo zinenani elinqunyiwe laminyaka yonke noma lanyanga zonke—azikho izindleko ezifihliwe noma izimali zokuthengiselana.
Qala Isivivinyo Sakho Samahhala Se-Sellfy
Ukudalulwa: Ngingumxhumanisi we- Ukuthengisa futhi ngisebenzisa isixhumanisi sami sobulungu kuso sonke lesi sihloko.
Tags: ukulahlwa kwenqolaamakhuphoniimikhiqizo yedijithaliokubhaliselwe kwedijithaliizaphuleloezokuhweba ngekhompyuthaukumaketha kwe-ecommerceplatform ecommerceimeyili Marketingukuphathwa kokufundaukuthengisaukuthengisa
Uyithuthukisa Kanjani Iwebhusayithi, I-Ecommerce, Noma Amasu Wombala Wesicelo